Andriamifidisoa Zo · Septambra 2021 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Septambra, 2021
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Septambra, 2021
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 27 Septambra 2021
Nanomboka ny taona 2014, miady mba hampisy ireo tetikasam-pandrosoana any anaty ala ny Antokon'ny Fampandrosoana sy ny Rariny (AKP), ka mahatezitra mafy ireo mpiaro ny tontolo iainana ao amin'ny vondrom-piarahamonina.
Azia Atsinanana 25 Septambra 2021
Heverina ho tsy ampy tanjaka ny antokon'ny fanoherana ahitana ireo anti-vakisiny sy ireo mpaneho hevitra diso toerana hanaisotra ilay governemanta japoney tsy tiam-bahoaka amin'ny fifidianana amin'ny oktobra ho avy izao.
Azia Atsimo 24 Septambra 2021
Mampiasa ny voan'ny hazon'i Damocles, taratasy vita asatanana avy amin'ny fakon'ny orinasa taratasy, sy solaitra mba hilazana ny tantaran'ny vahoaka teratany Tamang ilay mpanakanto Nepaley Subas.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Septambra 2021
Tao amin'ny toerana antsoina ho Maltepe, tanàna itatr'i Istanbul, no nanaovana fihetsiketsehana ary nakatoavin'ny Biraon'ny Governoran'i Istanbul. Mpanohitra fanta-daza maro amin'ny vakisiny no nanatrika ny fihaonana izay nahitana dokotera, mpikatroka, artista sy mpanoratra.
Azia Atsinanana 11 Septambra 2021
Nosamborin'ny polisin'i HK ny mpianatra oniversite efatra fa hoe 'miaro ny fampihorohoroana' amin'ny fisaonana fahafatesana mpanafika polisy iray. Mandritra izany fotoana izany i Shina hita miara-miasa amin'ny Taliban Afghan.